आज श्रावण ३० गते शनिबार, कस्तो छ तपाईंको राशिफल ? - kageshworikhabar.com
आज श्रावण ३० गते शनिबार, कस्तो छ तपाईंको राशिफल ?
आज मिति वि.सं.२०७८ साल श्रावण ३० गते । शनिबार। तपाईंको आजको राशिफल
तपाईंको दिन शुभफलदायक साबित होला। निर्धारित कार्य सफलतापूर्वक पूरा हुनेछ। अधुरो कार्य पूरा हुनेछ। शारीरिक तथा मानसिक स्वस्थता बनिरहनेछ। आर्थिक लाभ होला। सहकर्मीको सहयोग मिल्नेछ।
शारीरिक मानसिक अस्वस्थता अनुभव होला। छातीमा पीडा वा कसैसँग झगडा हुँदा अशान्तिमय वातावरण रहला। सार्वजनिक रुपले मानहानि हुँदा दु:ख अनुभव गर्नुहुनेछ। समयमा भोजन मिल्नेछैन। अनिन्द्राको शिकार हुनुहुनेछ।
कला बाहिर ल्याउने सुनौलो अवसर नगुमाउनु होला। तपाईंको रचनात्मक र कलात्मक शक्ति अधिक निख्रिनेछ। शारीरिक ,मानसिक स्वस्थता बनिरहनेछ। मनोरंजनको प्रवृत्तिमा साथी तथा परिवारसँग भाग लिनुहुनेछ। प्रिय व्यक्तिसँग भेट तथा कार्य सफलताको योग छ।
तपाईंको दिन संघर्षमय रहला। व्यापारको कारण निराश रहनुहुन्छ। व्यापारको कारण यात्रा हुने योग छ। उच्च अधिकारी प्रसन्न रहनेछन्। सन्तानको पढाईको सम्बन्धमा सन्तोष अनुभव होला। धन,मान-सम्मान मिल्ने योग छ।
तपाईंको दिन मिश्र फलदायी रहला। कार्य गर्न उत्साह रहला। सन्तानको चिन्ताले सताउनेछ। घुमफिरमा खर्च हुने योग छ। अधिकारीबाट सम्हालेर रहनुहोला। प्रतिस्पर्धीसँग गहन चर्चामा नउत्रिनुहोला। विदेशबाट समाचार मिल्नेछ।
तपाईंको दिन मध्यम फलदायी होला। अधिक परिश्रमवाला कार्यलाई अहिलेको लागि टाल्नुहोला। मानसिक, शारीरिक परिश्रम अधिक हुनेछ। आकस्मिक धनलाभ हुने योग छ। स्वास्थ्यको विषय सम्हालिनुहोला। अधिक खर्च नहोस् यस कुराको ध्यान राख्नुहोला।
Previous articleयस्तो छ आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को मौद्रिक नीति (पूर्णपाठ)
Next articleपहिरोले अवरुद्ध भीमदत्त राजमार्ग खुल्यो